केहि पनि खरीद गर्नुहोस् र ग्लोभोको साथ घरमा प्राप्त गर्नुहोस् Androidsis
सहयोगी परियोजनाहरू हुन् नेटवर्कको नेटवर्कलाई एक महान आयाम धन्यवाद लिदै र ती उपकरणहरू जुन हामीसँग स्मार्टफोनहरू र ट्याब्लेटहरू छन् जसले हामीलाई सेवा वरिपरि ठूलो संख्यामा एकजुट हुन मद्दत गर्दछ जुन एकजुट भएर काम गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ जुन अघि झुकाउन असम्भव थियो। उबर, यद्यपि यसले हजारौं आलोचनाहरू प्राप्त गरिसक्यो, यी मध्ये एउटा उदाहरण हो जसमा सामान्य व्यक्तिले अरूलाई उनीहरूको निजी कारका साथ लिन उधार दिन्छन्। वा ब्लाब्लाकार पनि, जसले यात्रा सस्तो बनाउँदछ जब हामी अरूलाई लिनको लागि सवारीको लाभ लिन्छौं र यसैले खर्च साझा गर्दछौं।
ग्लोभो सहयोगी कामको लागि पुग्दछ ताकि एकै शहर वा शहरबाट, एक प्रयोगकर्तालाई "ग्लोभर" भनिन्छ निश्चित शुल्कको लागि अरू कसैलाई उत्पादन ल्याउन सक्छ Of 4,90० प्लस खरीदको मामलामा उत्पादको मूल्य। यो यस अनुप्रयोगको मुख्य विचार हो र गत वर्षको नोभेम्बरमा Google ले मोबाइल इनोवेशन स्टार्ट-अपको लागि पुरस्कार प्रदान गर्‍यो, यो पहलको मान्यता जसले २०१ 2015 लाई closed०% ले बिलिbअपेक्षाहरू पार गर्‍यो। यो गत महिनामा हो जब यसले एक नयाँ संस्करण सुरू गर्‍यो जुन स्पष्ट सुधार ल्याउँदछ र म विस्तार गर्दछु।
1 तर ग्लोभोले कसरी काम गर्दछ?
2 उत्पादनहरु को बारे मा के मैले ग्लोभमा अर्डर गर्न सक्छु?
तर ग्लोभोले कसरी काम गर्दछ?
अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताहरू र स्वतन्त्र सन्देशवाहकहरूलाई सजिलै र चाँडो कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ। ग्राहक पक्ष बाट एउटा उत्पादन categories कोटिहरू मध्ये एकबाट छनौट गरियो र स्वतन्त्र सन्देशवाहकहरूले यसलाई तपाइँको घरमा लैजान कोशिस गर्दछन्, यदि तिनीहरू साधारण कुञ्जीहरू वा पर्स छन् भने। यो एक प्रकारको पार्सल, कुरियर र रसद यातायात सेवा जस्तो हो जसमा नेटवर्कका प्रयोगकर्ताहरू आफैं स्वतन्त्र कुरियर वा प्रयोगकर्ताहरू हुन सक्छन् जसले उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्राप्त गर्छन्।
यस कारणका लागि, यो स्वतन्त्र मेसेन्जर वा ग्लोभरहरू हुन् उनीहरूको खाली समयको साथ मद्दत गरेर उनीहरू ग्लोभोमा अग्रणी भूमिका खेल्छन् अरू मानिससँग जोसँग त्यति समय हुँदैन। उनीहरूले बदलामा के पाउँछन् अतिरिक्त आय हो र उनीहरूको सेवाहरूको लागि अनुप्रयोगमा प्राप्त गरेको मूल्यांकनमा निर्भर कमिशन प्रतिशत बढ्न सक्दछ। भरोसा उनीहरूले उत्पन्न गर्छन् र तिनीहरूको राम्रो काम ग्लोभोको पूर्ण रूपमा कार्य गर्नको लागि आधारभूत पक्ष हो।
यदि तपाईं यी लाइनहरू पढ्नुहुन्छ र तपाईं ग्लोभर हुनुको विचारमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई केवल एक स्मार्टफोनको आवश्यक छ, तपाईंको आफ्नै गाडी र राम्रो स्थिति सबै प्रकारका उत्पादनहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई प्राप्त गर्न। त्यो सन्देशवाहकहरु सार्वजनिक प्रशासनमा स्वतन्त्र कामदारको रूपमा दर्ता गर्दछन् र आफ्नो आय कर फिर्ताको मा वर्ष को अन्त मा आफ्नो आय घोषणा।
उत्पादनहरु को बारे मा के मैले ग्लोभमा अर्डर गर्न सक्छु?
ग्लोभोले प्रयोगकर्ताको साथसाथै कार्यालयहरू, ई-वाणिज्य व्यवसायहरू र परिसरको आवश्यकतालाई अनुकूल गर्दछ। बाट अर्डर गर्न सकिन्छ खाना आदेश, उपहार, over-the-काउन्टर औषधि चिकित्साकागजात, सामान र सुर्ती पठाउँदै। तिनीहरू के गर्न सक्दछन् भन्ने सीमा प्रयोगकर्ताहरूको कल्पनाले निश्चित बनाएको हो, जस्तै च्याम्पियन्स लिग फाइनलको लागि टिकटहरू लिने, AVE टिकट खरीद गर्ने वा जिम झोला उठाउने जस्ता।
सुरक्षाको सन्दर्भमा, ग्लोबोको सामान बीमा छ जुन कुनै पनि प्रकारको घटना २,००० युरो सम्म कभर हुन्छ। अन्य सद्गुण यो छ कि यो सम्भव छ परियोजनाको क्रममा अर्डर पत्ता लगाउनुहोस् र ट्र्याक गर्नुहोस् र अन्तमा मेसेन्जरले गरेको कामको मूल्या assess्कन गर्नुहोस्। यी मूल्या According्कन अनुसार उनीहरूले उच्च वा कम प्रतिशत प्राप्त गर्न सक्दछन्।
सेवा को भुक्तानी यो डेबिट वा क्रेडिट कार्डको साथ गरिन्छ अनुप्रयोग र सेवाबाट ग्यारेन्टी हुन्छ कि वितरण अवधि minutes० मिनेट भन्दा कम छ।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोग ले तपाईंलाई सक्षम हुन केही सरल लगइन चरणहरू मार्फत लैजान्छ फेसबुक प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यस चरण पछि, तपाई आफ्नो फोन नम्बर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो मनपर्ने शहरको पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को कुरा पाँच श्रेणिहरू बीच छनौट गर्नु हो: फार्मेसी, इलेक्ट्रोनिक्स, खाना, रेस्टुरेन्ट र किराना स्टोरहरू। अन्तत: ग्लोभर विकल्पमा सर्नको लागि तपाइँ म्याजिक डण्डबाट कस्टम अर्डर पनि छान्न सक्नुहुन्छ। यो उत्तम रूपमा सार्दछ र अनुप्रयोगको अनिवार्यहरूमा केन्द्रित हुन्छ एक राम्रो सामग्री डिजाइन प्रकार डिजाइनको साथ।
छोटकरीमा,aअनुप्रयोग र सेवा को रूप मा महान विचार उबर वा ब्लाब्लाकार जस्ता अरूसँग घटेका तपाईंले उनीहरूको आलोचना अवश्य भेट्नुहुनेछ।
साथै, प्रचार कोडको साथ NICETOGLOVEYOU तपाईं पहिलो नि: शुल्क शिपिंग र € credit क्रेडिटको मजा लिन सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं सेवामा नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुनेछ।
तपाईं अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » ग्लोभो, एक नयाँ अनुप्रयोगले तपाईंको शहरमा मिनेटमा सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ
गुगलले पहिलो गुगल प्ले पुरस्कारहरूका नामांकन प्रकाशित गर्दछ